Deerskin uwe ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ - China Deerskin gloves Manufacturers
Uwe mara mma nke deerskin nke nwere aji ajị anụ
Mere nke adụ na inogide deerskin ， The azụ akpụkpọ anụ nke uwe ji mara nkecha njiko mkpisiaka oghere, nkwojiaka eriri na sturdy button mmechi. Ọzọ collocate 100% feeece cuff. Ngwakọta zuru oke. azụ ikuku ahụ na-enye ume iku ume na ume kachasị aka gị. Kwesịrị ịnya ịnya ụgbọ, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike! Art no: DG-015M ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: ajị anụ ajị anụ ● Agba: Black b ...
Deerskin nkịtị nkecha handsewn gloves nwere isi ihe atọ
Ejiri akwa deerskin dị nro na-adịgide adịgide ， Ejiri aka mee ya, ya na ihe aka 3 nke aka ya na azụ. Otu obere oghere na otu eriri aka ya na mmechi snap nwere mmechi na akwa. Ọzọkwa ejiji dị mma na-agbanwe gburugburu nkwojiaka nke glove, Mma na mma. Kwesịrị ekwesị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike na ọtụtụ oge. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike! Art no: DG-008H ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: cashmere lining ● Agba: Black brown and other colors ● Size: ...
ukporo handsewn deerskin gloves nwere isi ihe atọ
Mere nke adụ na inogide ， A na-eji aka ha eme ihe. Otu obere oghere na otu eriri aka ya na mmechi snap nwere mmechi na akwa. Mma na mma. Kwesịrị ekwesị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike na ọtụtụ oge. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike! Art no: DG-007H ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: cashmere lining ● Agba: Agba aja aja na agba ndị ọzọ ● Size: Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Ndị nwoke: S / 8.5,M/9,L/9.5 ...
Deerskin na-akwọ ụgbọala nkecha aka aka aka ya na isi atọ nke aka aka
Ejiri akwa akwa na aka na-adịgide adịgide, otu obere oghere dị n'akụkụ akwa ahụ. Ma nye aka dị mma maka aka gị. Kwesịrị ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike ,. Nzuzo mba: DG-006H ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: enweghị mkpuchi ● Agba: Nwa aja aja na agba ndị ọzọ ● Size: Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Ndị nwoke: S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: Ee ...
Deerskin na-akwọ ụgbọala ndị aka na-enweghị aka na ihe atọ
Mere nke adụ na inogide deerskin ， aka stich imewe, Otu obere oghere n'akụkụ cuff.And collocate otu sturdy button Iyi na-eyi. Kwesịrị ekwesị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike! No Nzuzo mba: DG-005H ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: enweghị mkpuchi ● Agba: Agba aja aja na agba ndị ọzọ ● Size: Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Ndị nwoke: S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: Ee ● MOQ: 200 prs
Deerskin na-akwọ uwe ejiji aka na aka aka
Ejiri akpụkpọ anụ mee nke dị nro na nke na-adịgide adịgide ， Ha niile bụ aka aka aka. Na-adaba adaba iji. Perforated akpụkpọ anụ na a ventilated azụ na-enye kacha ume-ike na mgbanwe maka aka gị. Kwesịrị ekwesị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike! No Art no: DG-003H ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: ọ dịghị lining ● Agba: Black brown and other colors ● Size ...
Deerskin na-akwọ ụgbọala ejiji ejiri aka / aka aka
Mere nke adụ na inogide deerskin ， Ha niile bụ aka aka. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike, Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na a ventilated azụ na-enye kacha ume-ike na mgbanwe maka aka gị. nkwojiaka eriri na imechi bọtịnụ siri ike. Ọ dị mma iji. Kwesịrị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. No Art no: DG-002H ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: cashmere lining ● Agba: Agba aja aja na agba ndị ọzọ ● Size: Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Ndị nwoke: S / 8.5,M/9,L/9.5, ...
Mere nke adụ na inogide ， A na-eji aka ha eme ihe. Otu obere oghere na cuff.openings nwere ike ịbụ na nkwụ ma ọ bụ azụ. Ọ dabere na gị. Kwesịrị ekwesị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnyịnya ígwè, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike! No Nzuzo mba: DG-001H ● Ihe: 100% ezigbo deerskin ining Lining: enweghị mkpuchi ● Agba: Agba aja aja na agba ndị ọzọ ● Size: Ladies: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Ndị nwoke: S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: Ee ● MOQ: 200 prs
Ọkara mkpịsị aka aka ya na aka ya enweghị aka
Ejiri akwa deerskin dị nro na-adịgide adịgide ， dabara adaba ma nye ọfụma maka aka. Na-adaba adaba iji. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nwere akpụkpọ ụkwụ na azụ ikuku na-enye ume kachasị ume na ike maka aka gị. Onye ọ bụla nke Ọkara mkpịsị aka uwe aka na-eme ka ndị omenkà nwere ihe karịrị afọ 10. Kwesịrị ekwesị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnya igwe, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ ...
Fingerless ịnya ụgbọ ejiji deerskin uwe aka ya na isi atọ
Ejiri akwa deerskin dị nro na nke na-adịgide adịgide dabara adaba ma nye aka dị mma maka aka ahụ. Na-adaba adaba iji. Na-enyekwa ume kachasị ike na mgbanwe maka aka gị. Onye ọ bụla nke Ọkara mkpịsị aka uwe aka na-eme ka ndị omenkà nwere ihe karịrị afọ 10. Kwesịrị ekwesị maka ịkwọ ụgbọala, ịgba ígwè, ịnya igwe, mgbatị ahụ, egwuregwu n'èzí, ahụike. Super adụ ma na-eguzogide ọgwụ na ike, nkwojiaka eriri na mgbanwe snap mmechi ...